Welcome to Charleroi: Tourism trebles in the world's ugliest town
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Welcome to Charleroi: Tourism trebles in the world’s ugliest town
Welcome to Charleroi: Tourism trebles in the world’s ugliest town
Aprily 8, 2009
Marooned ao anaty ranomasina misavoana, ozinina tsy misy mponina ary tany karankaina, ny tanànan'i Charleroi any Belzika dia iray amin'ireo toerana tsy dia ampoizin'ny mpizahatany any Eropa.
Ny vondrom-piarahamonina mitrandraka arintany taloha dia malaza any Belzika amin'ny fananany taha ambony indrindra amin'ny famonoan-tena sy tsy an'asa ao amin'ny firenena.
Ny blackspot atsimo aza dia mampitandrina fa hiharatsy kokoa amin'ny krizy ara-bola manerantany izao - tsy mbola tafarina amin'ny resa-bola roa teo aloha.
Saingy izao, taorian'ny fitsapan-kevi-pifidianana izay tanàna ratsy indrindra eran'izao tontolo izao, tampoka io dia feno mpitsidika vonona handoa vola mba hahitany raha tena mamontsina an'i Charleroi izany.
Orinasa marobe no nipoitra nanomboka tamin'ny fanadihadiana, natao tany Holland mpifanila vodirindrina aminy, manolotra “safaris an-drenivohitra” manodidina ny sasany amin'ireo “manintona” mampidi-doza ao an-tanàna.
Ireo mpizahatany amin'ny fitsangantsanganana notarihin-tanana dia afaka mananika ny tampon-tanety, manara-maso ny tany karakaina taorian'ny indostrialy ary mitsidika ny trano rava an'ny mpamono zaza ratsy laza Marc Dutroux.
Azon'izy ireo atao ihany koa ny mahita ny sisin'ny trano fonenan'ny iray amin'ireo mponina malaza ratsy hafa an'i Charleroi - ilay mpamono vehivavy mpamono tena fotsy voalohany eran'izao tontolo izao Muriel Degauque, izay nipoaka ny tenany tany Baghdad tamin'ny 2005, taorian'ny nanambadiany ny radika silamo.
Mpikarakara fizahan-tany iray, Nicolas Buissart no nirehareha fa ny dia manodidina ny tanàna - izay seranam-piaramanidina ivon-toeran'ny seranam-piaramanidina mora vidy Ryanair - dia voavidy tanteraka mandritra ny roa volana manaraka.
Hoy izy: “Gaga ny mpitsidika noho ny tena fahatafintohinana misy ny tanànantsika. Na dia manidina aza izy ireo dia gaga amin'ny sehatry ny fahalotoana, ny maloto ary ny tany foana.
“Toa ny ratsy indrindra tamin'ny andron'ny kaominista rosiana izany. Tena fahitana mangatsiaka tokoa ny mijery azy.
“Mitondra olona manodidina mpanazatra tranainy iray izahay, mitsidika ny toerana ratsy indrindra rehetra - saingy ny safidy dia tsy misy farany satria kely ny tanàna dia tsy misy azo atolotra.
“Manantena aho fa hahatonga ireo mpitsidika ho mahatsiaro ho sambatra amin'ny toerana onenan'izy ireo.”
Na ny mponina aza dia mitaraina Charleroi tantanan'ny sosialista, miaraka amin'ny mponina 200,000 XNUMX, dia "fanariana tanteraka".
Ilay mpivarotra, Stephan Reignier, dia nilaza hoe: “Fahagagana io. Ny toerana iray manontolo dia tokony hohamafisina ary hatsangana hatrany am-boalohany. ”
Tao anatin'ny fiezahana hamily ny famoizam-po noho ny famoizam-po, ny tranokalan'ny fizahan-tany isam-paritra dia afaka nilaza momba ny tanàna fotsiny hoe:
Hatramin'ny nanombohan'ny Mr Buissart fitetezana ny tanànany dia nisy orinasam-pifandrafiana hafa natsangana izao ary nitombo avo telo heny ny fizahan-tany tao anatin'ny telo volana lasa izay, hoy ny lapan'ny tanàna Charleroi.
Nanampy ny mpitondra teniny: "Tsy dia zavatra tokony hireharehana izany, fa ao anatin'ny fotoana fohy, ny fidiram-bolan'ny mpizahatany dia afaka manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tanànantsika."
Fanarenana ny tsenan'ny hotely: jereo any Alemana, Espana ary ...
21 amin'ny tsenan'ny hotely 25 ambony any Etazonia amin'ny fahaketrahana na ...
Southwest Airlines dia manambara ny lefitra mpanatanteraka vaovao ...
Olona 17 naratra vokatry ny fipoahan'ny kamio baomba tany Los Angeles
Qatar Airways dia miditra amin'ny sehatra IGB's Turbulence Aware Platform
Tale jeneralin'ny Moderna: hifarana amin'ny tapaky ny 19 ny areti-mifindra COVID-2022
Boeing hananganana karazana drone vaovao any Aostralia
Costco hanohy indray ny taratasy fidiovana sy rano tavoahangy ...
Mpandeha lamasinina 12 no maty, 5 naratra vokatry ny tondra-drano ...
Tsy ara-dalàna ny fizahan-tany momba ny loza voajanahary any Hollande: Tsy misy toerana azo antoka ...